Ọkpụkpụ na ihuenyo Motorola RAZR ga-abụ nke nkịtị, site na onye nrụpụta | Gam akporosis
Kpochapụ na ihuenyo Motorola RAZR ga-adị mma, dịka onye nrụpụta si kwuo
Ụlọ Ignatius | | Ngwa gam akporo, Motorola
Releasebọchị mwepụta a tụrụ anya nke nloghachi nke Motorola RAZR, ghọrọ n'ime ama na a mpịachi ihuenyo, e mere ndokwa maka Jenụwarị, agbanyeghị, a manyere ụlọ ọrụ Eshia ka ọ kwụsị igbu oge ka ọ nwee ike nweta nnukwu mkpa, nke dịka ụlọ ọrụ ahụ siri kwuo, nwere maka ụdị ọhụụ na akara ngosi a.
Ọ ga-esi Jenụwarị 31 na maka euro 1.599 mgbe ndị ọrụ izizi nwere ike ijide Motoroloa RAZR ọhụrụ. N'adịghị ka Samsung, bụ onye bipụtara usoro ndụmọdụ mgbe ebidochara ya, ụlọ ọrụ Asia Motorola achọghị ka mkpịsị aka ya jide ma bipụtara vidiyo na YouTube ebe ọ na-egosi anyị usoro ndụmọdụ iji lekọta RAZR kachasị.
Na vidiyo akpọrọ ilekọta RAZR, anyị nwere ike ịhụ ndụmọdụ ndị a maka iji ọdụ a:
Nfuli na ụfụfụ adịghị mma. Ngosipụta RAZR na-agbanwe agbanwe, teknụzụ nke ka dị na nwata. Dabere na Motorola na vidiyo a, ihuenyo nke RAZR nwere ike ịpụta lumps n'oge ojiji nke njedebe, ihe nkịtị na ụdị ihuenyo a dịka ụlọ ọrụ ahụ si kwuo.
RAZR na-asọ oyi esiteghị n’ebe ahụ emeghị. Ọ bụrụ na ihuenyo ma ọ bụ akụkụ ọ bụla nke ọnụ mmiri ahụ abanye, na-ehichapụ ya na akwa akwa, anyị ga-ewepụ ma kpoo mmiri mmiri ma ọ bụ mmiri ọ bụla ọzọ nwere ike ịdakwasị ya.
Ọ bụ ezie na ihuenyo ahụ na-etinye mkpuchi pụrụ iche, dị ka ọdụdụ ọ bụla ọzọ, ọ dị mkpa zere ihe dị nkọ dị ka o kwere mee na-abata na ihuenyo. Nguzogide ihuenyo ndị a dị nnọọ ala karịa ihe anyị nwere ike ịhụ ugbu a n'ahịa.
Ejila ihe nchebe ihuenyo. Dị ka Samsung, Motorola na-ekwu na ọ dịghị ojiji nke a ihuenyo nchekwa, ebe ọ bụ na ụdị ngebichi a adịbeghị njikere maka ya.
Ikpeazụ n'ọnụ bụ na ka anyi n'ogige onu tupu itinye ya n'akpa ma ọ bụ obere akpa.
Banyere akpụ na ihuenyo ... na lumps na ihuenyo bụ ihe kwesịrị ekwesị maka Motorola n'ihi ọdịdị nke ihuenyo na-agbanwe agbanwe bụ ihe ndị ahịa ga-enwe ekele maka. Echeghị m na m na-echeta ihe ọ bụla ikpe akpụ na ihuenyo Samsung Galaxy Fold, ma hu na o nweela nsogbu kemgbe tupu ya amalite na ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Kpochapụ na ihuenyo Motorola RAZR ga-adị mma, dịka onye nrụpụta si kwuo
Samsung ga-enyefe Galaxy Buds ọhụrụ + nke izizi idobe S20 + na S20 Ultra
HMD Global na-ezube ịmepụta Nokia 9.2 PureView ọhụrụ